De moka ratsy a ! - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Lany ny lalàna mifehy ny mpanohitra eto Madagasikara. Lalàna nasiam-panovana, ary ny antoko nanoratra azy tanaty Lalàm-panorenena ihany, no nanova azy rehefa tena azony ny fahefana. Miditra any an-dapa ny demokrasia. Any amin’ny Anteminieram-pirenena ihany no misy demokrasia. Fa raha misy olona manao fihetsiketsehana dia tokony ho sazian’ny lalàna. Raha tsorina dia natao handatsa-bato fotsiny ny vahoaka, ary fifidianana ihany no demokrasia eto amintsika. Zary fialokalofana ny lalàna nefa ny olombelona ihany no manao ny lalàna.
Fanambaniana ny mpifidy satria izay nomena fahefana no mibodo fahefana. Ireo olom-boafidy ihany no mandidy dia homana eto amin’ny firenena. Rehefa nomena azy ny fahefana dia izy no misolo vava anao, izy no saina aman-tsofinao, izy no fahefana sy lalàna…. Mandidy manapaka e ! Mahay isika Malagasy raha hanambaka vahoaka. Ary ho avy eny amin’ny vahoaka izy mianakavy hanazava fa io no tena demokrasia hampandroso. Niainga avy any Ikongo izy ity. Ary fomban’ny ampanjakan’ny tranobe no apetraka amin’ny firenena. Ao amin’ny tranobe no mandidy manapaka. Tsy modely demokratika ny fitantanana tranobe. Tsy fanjakan’ny tranobe ny Anteminieram-pirenena, ary tsy Antanalan’Ikongo daholo ny Malagasy. Raha fitaratra iny distrika iny efa nihazakazaka ny filoha nametraka zavatra manara-penitra tany Ifanirea, Karimbelo, Antanakamba, Antodinga… Tamin’ny andron’i Tsiranana no nisy fikasana hanao ny tetezana Angado. Tsy RN 44 ny lalana mampifandray an’ikongo, Antanakamba, Ifanirea na Vohipeno- Angado –Ifanirea, Karimbelo.
Sao dia fomba enti-mampanjaka fifandrafesana tsy hisian’ny fihavanan’ny mpirahalahy ity lalàna ity ? Sao dia fandrangitana ny fankahalan’i Kaina an’i Abela, mba hanjakan’ny mpandrombo amin’ny tanàna? Manjary Kaina sy Abela ho azy Rajoelina sy Ravalomanana rehefa ny politikan’ny « zarazarao hanjakana », no zary lova politikan’ny zanaka amam-para.
Hanorina tanàna vaovao isika, fa mbola tanàna hanjakan’ny zarazarao hanjakana ihany ve ? Raha ny Malagasy ihany no mahita tombontsoa amin’ny zarazarao hanjakana, dia mbola ho sarotra ny hanasitrana ny lova navelan’ny fialonan’i Kaina sy ny fiarahamonina naoriny. Ny zarazarao hanjakana kolokoloin’ny samy Malagasy no tena fahavalon’ny fihavanana sy ny fifankatiavan’ny samy Malagasy. Tsy mila vahiny hibaiko intsony. Efa dila ny fifanoheran’ny PADESM sy ny MDRM, nambolen’ny mpanjanaka. Fa ny lova be navelany amin’ny politikan’ny zarazarao hanjakana mbola ifandovana ankehitriny. Mila manova ny tantara ny lalàna ary mila mahafehy ny tantaram-pireneny ny antoko mihevi-tena ho maro an’isa. Fa tsy fifandrafesana olona na antoko roa ny fiainam-pirenena.
Raha toa ny lalàna manjary fepetra mitaiza io lova politika navelan’ny mpanjanaka io dia be no ho kaikerin’ny moka amin’izany. Satria « de moka ratsy » no naterany. Iny faritry ny Antanala misy ny depiote Zafintsiandraofa iny dia faritra be moka. Ny demokrasian’ny moka dia mihinana toa parasita. Teraky ny kolontsaina sy fiarahamonina ihany ny fiheverana ara-politika. Ny fiarahamonintsika anefa no mila fampandrosoana. Ny demokrasia rahateo mbola mila ianarana. Vitsy angamba no tsy vahiny amin’izany ao amin’ny Anteminiera. Hiverina amin’ny fananganana mandatehezan’ny revolisiona indray ve isika ? Sa malalaka ny fanaovana politika eto Madagasikara ?
Ny fanaon’ny antoko politika nahazo fahefana no mila hovana. Ny fanaovana lalàna eto amintsika no mila dinihina mba ho toe-panahin’ny lalàna ny fihavanana sy firaisan-kina. Amin’izay vao ho lavin’ny fitiavan-tanindrazana ny zarazarao hanjakana.